Marqaan News Agency » Khaatumooy Wixii Jiraaba Cakaaru Imaan!
Dec 26, 2016 - 5 Jawaabood
Labadii qobod ee cadeynayey Isku biirida waad sheegtee mee qodobka aad tiri wuxuu cadeynayaa inan laysku biireyn mise waad ilowday. Ta kale markaad wax qorayso lama noqdo emotional ee waxaa la noqdaa professional.
Horta mid waad ku saxsan tahay oo Khaatumo waxay ku biiri doontaa Somaliland. Ama hasoo dedejiyaan ama ha sii yara cago jiidaane.
Waxaan u malaynayaa in ay Doorashooyinka soo socda isku aadin doonaan oo ay maamul daadejintu halkaas ka bilaabi doonaan. Calaashaan dad Khaatumo taabacsan ama ku jira xisbiyada laakiinse khaatumo taageertay (Endorsed by KH or Recomended by KH). Halkaasna ay kasoo baxaan goleyaal dawlad hooseed yaryar oo ka arimiya tuulooyinka iyo magaalooyinka ay Khaatumo sheeganayso.
Tan ciidanka, Odaygii Khaatumo dhankeeda ka socday ee la waraystay, anoo soo koobaya jawaabtiisa waxa ku jiray erayadan. Ciidanka waxa loo sameystaa inuu kaa difaaco cadaw dibada kaaga imanaya. Beledkana ciidan dibada kasoo weeraray ma jiraan. Markaas iyada oonay degaamada SSC oo dhan faaruqinayn, waxa laga baaraandegayaa kolka ugu haboon ee xeryahoodii dabiiciga ahaa loogu celin lahaa.
Taas macnaheeda oo koobani waa ciidanku ma baxayo oo dhulkiisii ayuu joogaa. Laakiinse Xeryahoodii ay markii horeba degenaayeen ayuu dib ugu noqonayaa isaga oo dhamaan Somaliland oo dhan oo ay ku jirto SSC ka wakiil ah.
Hadaan usoo noqdo qodobada aad tidhi israac kuma imanayo. Horta qodobo saaxi ah meesha maad keenin. Laakiinse meelo hoose ayaad ku laabatay. Waayahay. Shaki kuma jiro hadii ay Khaatumo Somaliland ku biirto inay soo bixi doonaan dad imika iyaga la socda oo kasoo horjeedsan doona. Laakiinse taad is diidsiinayso eenad rabin inaad tidhaahdo waa iyada oo kaalin weyni ay banaanaandoonto. Somaliland waxa ay ku macaashaysaa Magaca Khaatumo oo ay soo xero gelisay. Dhowr siyaaboodba wey ugu macaasheysaa.
1. Khaatumo cududeeda ugu weyn ee ay ilaa iyo imika leedahay waa Cabaadkeeda oo dheer oo meel walba laga maqlayo. Khaatumo cudud ciidan ooy ku dagaalantona malaha, karti iyo shacbiyad badana ma laha. Laakiinse wey qaylo dheereyd. SSC iyadu waabay dagaalami jirtaye. Markaas Cabaadkoodii ayaa hadhaya. Taas bedelkeeda inta ay afka kala qaadaan ayay ku digriyi doonaan in ay meel walba soo taabteen oo Somaliland wax u dhaama ay waayeen. Intii aanan dhegaha ka furaysanina boqol goor ayay maqli doonaan. Aduunkoo dhana wey gaadhi doontaa.
2. Qalbi jab weyn oo ku dhici doona inta iyagu aanan jecleyn Somaliland. Xitaa haday is yidhaahdaan dib meel hoose wax uga soo yagleela uma suurtoobi doonto waayo aad iyo aad ayay u adagtahay in dad niyad jabsani iyagu hoosta Jabhad kasoo yagleelaan. Ina ku dhiirata ee yagleela is tidhaahdaana wey ku adkaanaysaa in ay taageero ka helaan shacbiyad niyad jabsan. Xitaa haday inyar isla helaan taagtooda iyo tabartooduba wey kasii liidan doontaa tan Khaatumo oonan waxbaba is la heyn. Cabaadna waxa kasii liita waynu garanayaa oo waa baroorasho. Rag googarado iyo duruuc inay soo xidhaan baroortana waxa ay inagu noqon doontaa xaajo ugub ah. Laakiinse anigu waxa aan leeyay kii is leh wey kuu maraysaayoow baroortu waa kuu furantahay.
3. Somaliland waxay khaatumo ku bahdishay waa cudud ciidan. Geed walba ooy fadhiista is yidhaahdeen wey ka eriday. Waxa ay u diiday inay jaanta iyo jiibta isla helaan. Meel ay salka dhigtaana waa heli waayeen. Takale ee ay ku bahdishay waa iyada oo u weydaaratay beelihii dhulbahente heshiishoyona la gashay. Khaatumo cabaadkii u weynaa taas ayaa ka keentay. Waarbal iska kaaya caydhsada anaga ee dadkuun noo daaya leeyihiin. Ta ugu weyn ee hadalka ku qasabtayna waa taas. Waxa ay ka hoos siibtay waxay Khaatumo ku andacoon jirtay oo aheyd dadkayagaa na taageersan. Degaankii oo ay ka heysato ayay kaga darsatay in dadkiina in badan ka xantoobsato. Macaashka tan kujiraa waa marka ay Somlailand soo xero geliso Khaatumo waxa sii kordahaya dadkaas ay markii horeba la heshiisay oo Somaliland aad usii taabici doona. Taabacaadaasina waxa ay sii shiiqin doonta qolyaha kale ee wax yagleela is yidhaahda oo waayi doona cududii aya ka heli lahaayeen ugu yaraan qalbiga dadkaas.
Aan soo gabo gabeeyee, Khaatumo oo Somaliland u guryo gashaa Somaliland inay wax usoo kordhiso mooyaane waxba kama dhimayso.
Horta Ma Cali khalif baa snm ku biiraya mise shacabka Khaatumo ?
Cali khalif waa shakhsi siyaasi ah meeshuu doonuu aadikara laakiin shacabka khaatumo 100% waxay aaminsan yihiin qadiyada Somaliya . Qabiilna qabiil kale kuma khasbikaro wuxuu isagu rabo .
Cali haduu jabouti ku biiro ama Ethiopia waa mid isaga Uun saameyneysa laakiin yaan la ilaawin kitaabkii lagu dhaariyey ee ahaa inuu shacabka khaatumo ugu adeego waxay ku jirto qadiyada Somaliya iyo qarankeena Somaliya .
Waxaan aaminsan sanahay kooxda hargiesa iyo burco in ay ku biirayaan Dalkeena Somaliya iyadoo Dee dhulkaas degan yihiinba Somaliya leedahay juquraafi ahaan , waxaana ku cadeyneysa inuu ciro la kulmay raysalwasaaraha dalka kana wada Hadleen doorashooyinka sanadka 2016 .
Snm 26 sano been iyo huuhaa ku noolayeen waxaad mooda hada in ay xaqiiqda fahmeen ogadeena in Somaliya taako yar Ka go,ayan
Qof walbaaba waxa uu soo qorayo waa u fasax laakiinse marka aad maqaaladan oo kale akhrisataan waa la’idiinka baahan yahay falanqeyn aad falanqeysaan mawduuca laga hadlayo.
Qodobada aad soo daliishadaana waa inay saafi ahaadaan.